ETEX chepụta ma mepụta nchịkọta buru ibu nke Vertical Blind Fabrics. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Vetikal blind blindures bụ ezigbo ọdịnala na ejiji ejiji anyanwụ na-ekpuchi akwa kpuchie akwa site na mgbe emere ya na narị afọ gara aga. ejiji dị mfe na windo, ịdị mfe ọrụ, nhichapụ dị mfe. Nnukwu n ’ihu ọkụ na-agbazi agba na ụdị ejiji dị n’ime ụlọ. ETEX meputa ihe ndi ozo ...
ETEX na-enye usoro ihe mechiri emechi zuru ezu maka Roler, Vertical, Zerba Blinds, Roman Blinds. Site na imewe iji kwado usoro ikpu ìsì dị iche iche n’ahịa ụwa, anyị na-echepụta ma mepụta ihe dị iche iche na nkọwapụta maka blinds dị iche iche, nke na-ewu ewu na Europe, Eshia, Latin-American, Australia, Mid-East. Enwere ike dị ike na-emepe emepe ọhụụ maka mkpa ndị ahịa, ọnụ ahịa ziri ezi na ezigbo ike. Ihe dị n’ime anyị bụ POM, PVC,…
Mkpọchi Roller: Ihe mkpuchi Roller mechiri anya bụ ihe ama ama n'ụwa niile maka ihe ndozi windo. Were uru nke ọrụ dị mfe, ụdị dị mfe, nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ nke akwa. Ndị mmadụ na-ahọrọ Roller kpuchie ọtụtụ maka ihe ịchọ mma. Ndị na-agụchi ihe mkpuchi na-enye ihe mkpuchi na akwa akwa jikọtara ọnụ, onye ahịa nwere ike imeghe ma wụnye ya N'onwe Gị. Mfe ịwụnye na mfe ịgbanwe. Roller blinds Ọrụ: Roller blinds bụ ihe dị ọnụ, ihe bara uru na vasatail windo na-eme nke ọma na…
ETEX Weave Series nke Jacquard Roller Blind Fabrics. Ma Yarn anwụrụ & Piece akwa eji eji. Enwere ihe osise karịrị narị atọ nke jacquard ejiji na nchịkọta anyị. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Igwe eji ekpuchi mkpuchi na-enye nzuzo na gbakwunye ejiji na ebe ọ bụla. na-abụwanye ejiji na ụlọ ọrụ ndozi anyanwụ ebe ọ bụ na ọ na-agbakwunye ụdị ejiji dị mfe karịa na windo, ...
ETEX Weave Series of Roller Blind Fabrics. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Igwe eji ekpuchi mkpuchi na-enye nzuzo na gbakwunye ejiji na ebe ọ bụla. na-abụwanye ejiji na ụlọ ọrụ ndozi anyanwụ ebe ọ bụ na ọ na-agbakwunye ụdị ejiji dị mfe na windo, mfe iji rụọ ọrụ, nhichapụ dị mfe. ETEX na-emepụta ihe karịrị 20 na -ewu akwa ọhụrụ na ihe ejiji dị elu. Ihe mejupụtara: polyes 100% ...
ETEX Weave Series nke Sunscreen Blind Fabrics. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. Ihe mkpuchi Sunscreen Roller Blind na-enye nzuzo yana ọrụ nzacha ọkụ. na-abụwanye ejiji na ụlọ ọrụ ndozi anyanwụ ebe ọ bụ na ọ na-agbakwunye ụdị ejiji dị mfe na windo, mfe iji rụọ ọrụ, nhichapụ dị mfe. ETEX na-emepụta ihe karịrị 20 na -ewu akwa ọhụrụ na ihe ejiji dị elu. ● Composi ...
Anyị na-arụpụta ìsì dịgasị iche iche nke venetians. :Dị: ● Osisi Venetians blind, Bamboo Venetian blind Bl PVC Faux Wood Venetian Blinds ● Aluminium Venetian Blinds E nwere ụdị dị iche iche nke dabara maka ndị ìsì ebe a na-eji: ● Sistemu Ebu ● Sistemu ● Sistemụ Ntọala Venetian, mgbe ụfọdụ a maara dị ka slat blinds. ma ọ bụ mgbochi kwụ ọtọ, mee ezigbo nhọrọ maka ákwà mgbochi ma nwee ike ịmepụta nkecha na nke ọhụụ n’ime ụlọ gị. Anyi nwere uzo mara mma nke eji eji udidi eme ihe, oria alumini ...
Vindical Blinds bụ windo ọdịnala kachasị ewu ewu. Ya na ọrụ nke ikpochapu na idozi ya. Dabere na ụdị ihe eji emepụta ihe dị iche iche, Vetikal Blind bụ nhọrọ kachasị ewu ewu ma dị mfe dakọtara na mkpa gị. Ihe: 100% Polyester Width: 89/100 / 127mm Vane Sistem: Chain / Wand Sistemuma Mepụtara: Plain, Jacquard, Blackout, FR .. Aluminium: Narrow, Square, High, Low Track Anyị mechiri emebi kpuchie ime ụlọ. Ha na-enyere aka idobe nzuzo, hazie ọnọdụ okpomọkụ, na ịkwụsị b ...
Zebra kpuru ìsì na-enye ihe nzuzo na gbakwunye ụdị ejiji ọ bụla. na-abụwanye ejiji na ụlọ ọrụ ndozi anyanwụ ebe ọ bụ na ọ na-agbakwunye ụdị ejiji dị mfe na windo, mfe iji rụọ ọrụ, nhichapụ dị mfe. Ọbụghị naanị na anyị na-akpali ụdị ejiji na echiche maka akwa, anyị na-agbasokwa usoro mba dị iche iche nke nchedo ahụike maka ngwaahịa ngwaahịa. ETEX na-emepụta ihe karịrị 100 na -ewu akwa ọhụrụ na ihe ejiji dị elu. Ihe mejupụtara: 100% polyester ma ọ bụ PVC Sunscreen zebra ● mkpuchi: Acid Acid ● ...
Roman Blinds sitere n'ike mmụọ nsọ nke akwa dị nro nke na-agbakwunye mmetụta dị nro na-ekpo ọkụ nke akwa akwa maka ime ụlọ. Sistemụ: Igwe njikwa / Wand Control ● :kpụrụ: Plain, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, Sheer, -dị akwa ọkụ ● akwa: Sedị ịkpụ ụdị cutting device ngwaọrụ nchekwa maka ndị ọ bụla mechiri anya Oge Ochie roman blinds na-eji windo ndị na-atọ ụtọ na-eji ejiji gị windo. . Ma ị masịrị usoro ọdịnala maka kichin, ma ọ bụ ifuru roman blinds maka ime ụlọ, Ezigbo maka ịmachi ebe anwụ na-acha ...